:: My Little World ::: August 2008
ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့နေ့ ရက်တိုင်းကို ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ…
ဆန္ဒ နဲ့ဘ၀ ထပ်တူထပ်မျှကျအောင် ဖန်တီးနိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါစေ..
စိတ်ကူးထဲကလို စိုပြေငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါစေ..
Posted by Nay Nay Naing at 8/08/2008 12:01:00 PM 8 comments
Perhaps Love - John Denver (Duet with Placido Domingo)
Perhaps Love - John Denver (Duet with Lene Siel)
၁၉၈၀ က သီချင်းဟောင်း တစ်ပုဒ်။ ဒီသီချင်းကို သီဆိုရေးသားသူ "John Denve" ကိုတော့ အတော်များများ သိမှာပါ။ အခု သီချင်း "Perhaps Love" ကို မသိကြရင်တောင်မှ သူရဲ့ "Take Me Home, Country Roads" သီချင်းကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်တယ်။ ဒီကို ကြိုက်လို့ လိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါ John Denve ကိုယ်တိုင် ဆိုတာတောင်မှ ဗားရှင်း ၃ မျိုးကွဲနေတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ John Denver တစ်ယောက်တည်း ဆိုတာ၊ Plácido Domingo နဲ့တွဲဆိုတာ၊ danish အဆိုတော် Lene Siel နဲ့တွဲဆိုတာ ၃ မျိုး ရှိနေတယ်။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်တည်း ပြန်ဆိုထားတာလဲ ရှိတယ်။ သီဆိုတဲ့သူက ဖိလစ်ပီနိုအဆိုတော် Jheena Lodwick ပါ။ အဲဒီဗားရှင်းလဲ တမျိုးလေးနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/08/2008 09:28:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 8/07/2008 03:37:00 PM 10 comments
Posted by Nay Nay Naing at 8/07/2008 02:54:00 AM 1 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ လက စပြီး စင်္ကာပူမှာ မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် အများအပြား အသစ်ဖွင့်တာ တွေ့ ရတယ်။ မြန်မာတွေ စုလေ့ရှိတဲ့ Pennusila Plaza မြေအောက်ထပ်မှာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ အရင်က အစာသောက်တွေ ရောင်းတယ်၊ နောက်တော့ အ၀တ်အထည်တွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကြီး ဖြစ်သွားတယ်၊ အခု တစ်ခါ စားသောက်ဆိုင်တွေ ပြန်ဖြစ်သွားပြီး၊ အဲဒီက ဆိုင်အများစုက မြန်မာ အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေ ဖြစ်တာ တွေ့ ရပါတယ်။
ဆိုင်အသစ်တွေထဲမှာ ပထမဆုံး သွားစားဖြစ်တာ Oriental House ဆိုင်မှာပါ။ ရန်ကုန် Oriental House က ဆိုင်ခွဲလာ ဖွင့်ထားတာလို့ပြောကြတယ်။ စားရတာ မဆိုးပါဘူး။ တချို့အစားအသောက်တွေက အင်းလေးထက် ဈေးပိုပေါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ အစားအစာတွေကြတော့ ဈေးပိုကြီးနေပြန်ရော။ Set Menu က အစားသောက်တွေဆို ၄.၈၀ ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ ပေါတယ်၊ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့် Set Menu မဟုတ်တာတွေ မှာမယ်ဆို အသား၊ ငါး ဟင်းတင်မကဘူး၊ အသုတ်တွေပါ ၁၀ အောက် မရှိဘူး။ ထည့်ပေးတာတော့ အင်းလေးထက် များတယ်။ အရွက်ကြော်တွေကတော့ ၆.၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ သူငယ်ချင်း ၄-၅ ယောက်နဲ့သွားစားမယ်ဆိုရင် တော့ မှာ စားရတာ သင့်တော်မယ်။ ကျွန်မ တို့ ဆို သူငယ်ချင်း ၂-၃ ယောက်ပဲ စားပြီး၊ စားတဲ့အခါ ထမင်းနဲ့ ဟင်းအမျိုးအစား ၃-၄ မျိုး ၊ တခါတလေ ၅ မျိုးလောက် မှာစားလေ့ ရှိတတ်သူတွေ အတွက်တော့ Oriental House ထက်စာရင် အင်းလေးမှာ စားရတာ ပိုပြီး အဆင်ပြေ ဈေးသက်သာတယ်။ ထမင်းမစားပဲ ကြာဇံကြော်၊ ခေါက်ဆွဲကြော် တွေဘာတွေ စားချင်ရင်၊ အပေါ်က ဆိုင်တွေမှာလည် မစားချင်တဲ့အခါတွေမှာ Oriental House မှာ သွားစားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Oriental House Resturant (Singapore) ရဲ့ လက်ရှိ Menu
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့Irrawaddy မှာ သွားစား ဖြစ်တယ်။ အဲဒီဆိုင်က ဟော့ပေါ့ ကို အဓိက ရောင်းတာနဲ့တူတယ်။ မီဖိုနဲ့ အိုးလေးတွေ တွေ့ တယ်။ ဟော့ပေါ့ မစားဖြစ်လို့အရသာကောင်း မကောင်း မသိဘူး။ Menu မှာ ၁၉ လမ်း အသားကင်တွေ ဘာတွေ ရေးထားတာတွေ့ တော့ မဆိုးဘူး စားကြည့်မယ်ဆို မှာတာ၊ အခု မရသေးပါဘူးတဲ့။ မီနူးမှာ ရေးထားတဲ့ စားချင်တာတွေ အတော်များများ မရဘူး။ ခုမရောင်းသေးဘူးတဲ့၊ ဘယ်တော့မှ ရောင်းမလဲ မသိဘူး။ မရောင်းတဲ့ အစားအစာတွေ မီနူးထဲ ထည့်တားတာကတော့ မသင့်တော်ဘူးပေါ့။ ဖျက်သင့်ရင် ဖျက်ထားသင့်တယ်။ ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်ပြီးမှတော့ ပြန်မထွက်ချင်တော့တာနဲ့ရတာတွေထဲက ကြည့်မှာ လိုက်ရတယ်။ အဲ့ဒီဆိုင်မှာ Beer သောက်နေသူတွေ များတယ်။ သွားစားဖြစ်တဲ့ နေ့ ကဆို ဘီယာ တဂျားမှာရင် ၁ ခွက်အပိုပေးတယ် သိရတယ်။ Beer သောက်ရင်း စားဖို့Snack ပုံစံတွေ၊ ငါးမုန့် ကြော်တို့ ၊ ဟိုအကြော် ဒီအကြော်တွေကို တစ်ပွဲ S$3 နဲ့ ရောင်းတယ်။ အကြော်စုံ (အသီးအရွက်) လား နာမည်သေချာ မမှတ်မိဘူး မှာ လိုက်တာ ပြောင်းဖူးအသေး နှစ်ခြမ်ခွဲ၊ ငရုတ်သီး အတောင့်ပွ၊ မုန်လာဥနီ နဲ့တခြား ဘာလည်းမသိဘူး လက်မလောက်လေးတွေကို တစ်မျိုးကို နှစ်ခုစီ မုန့် နှစ်နဲ့ကြော်ထားတာ လာချပေးတယ်။ ပလျှူး ထမင်းကြော်နဲ့ကတ်ကြီးကိုက် စားတာ စားလို့ မကောင်ဘူး။ ကတ်ကြီးကိုက်က ပိုဆိုးသေးတယ်။ ခေါက်ဆွဲဖတ်က အပြားအရမ်းကြီးပြီး ပဲပြုတ်ကလည်း နည်းနည်းလေးပဲ ပါတယ်။ အရသာ လုံးဝ မရှိဘူး။ အစားအသောက်ကို ကုန်အောင်စားရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့်သာ မနည်းစားခဲ့ရတာ၊ အရင်စိတ်နဲ့ ဆို တစ်ဇွန်းထက် ပိုစားဖြစ်မယ် မထင်။ ခုလက်ရှိ အနေအထားနဲ့ ဆို ဟော့ပေါ့ မဟုတ်ပဲ တခြားဟာ စားမယ်ဆိုရင် Irrawaddy မှာ နောက်ထပ်စားဖြစ်ဖို့မစဉ်းစားသေးဘူး။ ကိုယ်ဟာကို ၀ယ်စားရမယ်ဆို အချိန်နည်းနည်းကြာမှ ထပ်သွားစားကြည့်တော့မယ်။ ဒီကြားထဲ သူငယ်ချင်းတွေ ကြွေးလို့စားရမယ်ဆို အပြင်ကနေ မီနူးအရင်ပြခိုင်းပြီး ဘာရမရ အရင်ပေးမယ် စိတ်ကူးတယ်။
Oriental House နဲ့Irrawaddy မှာ လုံးဝ မကြိုက်တာ တစ်ခုက သောက်ရေ မပေးတာပါပဲ။ အင်းလေးမှာ ထိုင်လိုက်တာနဲ့ရေလာချပေးတယ်။ Oriental House မှာ ဘာအအေးသောက်မလဲပဲ မေးတယ်။ သောက်ရေ ချမပေးတာနဲ့သံပရာရေ မှာသောက်တာ ဘာအရသာမှကို မရှိဘူး။ ဘာလိုနေမှန်းကို မသိတာ။ အိမ်မှာ ကိုယ့်ဟာကို ဖျော်သောက်တာတွေကတောင် ဒီထက် ပိုကောင်းသေးတယ်။ Irrawaddy မှာလည်း ရေ လာမချပေးဘူး။ ဒါပေမယ့် အတူသွားစားတဲ့ သူငယ်ချင်းက ရေချပေးပါပြောတော့ ရေအေးအေးလေး နှစ်ခွက် လာချပေးပါတယ်။ ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်းသွားစားတာဆို သူလိုမှာ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တခြား ဘယ်သူမှလည်း ရေသောက်နေတာ မတွေ့ ဘူး။ အလကားပေးမှန်း မပေးမှန်းမသိ၊ မတောင်းချင်ဘူး။ အလိုလို လာချပေးတာကို ပိုကြိုက်တယ်။ အင်လေးမှာဆို ချပေးဖို့မေ့နေတောင်မှ ရေချပေးလေ့ ရှိမှန်းသိတော့ တောင်းဖြစ် သေးတယ်။ Irrawaddy မှာ အအေး အနေနဲ့ထောပတ်သီးဖျော်ရည် မှာသောက်တယ်။ ဈေးက Oriental House နဲ့အင်းလေးထက် ပိုသက်သာတယ်။ ကျွန်မအတွက်တော့ အရသာ မဆိုးဘူးပြောလို့ ရတယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ နည်းနည်းယူသောက်ပြီး ကောင်းလည်း မကောင်းဘူးလို့ပြောတာပဲ။
ဆိုင်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု့ အနေနဲ့ ဆို Oriental House နဲ့Irrawaddy ၀န်ဆောင်မှု့ က အင်းလေးထက် ပိုကောင်းတယ်။ စာပွဲထိုးတွေက ပြောတာ ဆိုတာ မဆိုးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စအလုပ်လုပ်တာမို့ လားမသိဘူး၊ ကိုယ့်ဆိုင်မှာ ဘာရလဲ၊ ဘာမရဘူးလဲ မသိကြဘူး။ အင်းလေးက လူခွဲဆက်ဆံတာမျိုး ရှိတယ် ပြောကြတယ်။ ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်းတွေ သွားစားရင်တော့ အင်းလေးက လူတွေက မှတ်မိနေလို့ လား မသိဘူး ပြောတာဆိုတာ အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ပတ် ၁-၂ ခါ အနည်းဆုံး လာစားနေမှတော့ မှတ်မိပြီပေါ့။
အင်းလေးက တော့ တစ်ခုခုမှာရင် ကြာတာ ထုံးစံလိုပဲ။ ဒီတော့ အချိန်စောင့်ပြီး စားနိုင်မှ သွားစားတယ်။ စားတဲ့သူများလို့မနိုင်တာဖြစ်မယ်။ အရင်က မြန်မာဆိုင်က သူတစ်ခုတည်းလို ဖြစ်နေတယ်လေ။ အခုတော့ ဆိုင်တွေများလာပြီဆိုတော့ စားတဲ့သူမျှသွားပြီး ပိုပြီး အဆင်ပြေ၊ မြန်ဆန်လာမယ် ထင်တယ်။ အပြိုင်အဆိုင်ရှိတော့ ပိုကြိုးစား၊ တစ်ဆိုင်နဲ့ တစ်ဆိုင် ပိုကောင်းအောင် လုပ်လာမယ်ဆို စားသုံးသူတွေအတွက် အမြတ်ပဲ။ အင်းလေးမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ က နေ့ လယ်စာ သွားစားတာ ပန်ကန်တွေတောင် ပုံစံအသစ်နဲ့ ဖြစ်နေတာ တွေ့ ရတယ်။ ထမင်းနဲ့ဟင်း set ၂ ပွဲ (ကြက်သားနဲ့ငါးခူခြောက်စပ်) နောက်ပြီး၊ ငါးဖယ်သုတ်၊ ကန်စွန်းရွက်ကြော် မှာစားတယ်။ သူငယ်ချင်းက ထမင်းလိုက်ပွဲ ထပ်ယူတယ်။ အားလုံး S$27 ပေးရတယ်။
အင်းလေးမှာ တချို့ စာပွဲထိုးက စကားပြောတာ အဆင်မပြေတာ ကြုံဖူးပါတယ်။ အစက စိတ်ဆိုးမိသေးတယ်။ နောက်တော့ တော်ရုံ အဆင်မပြေတာ လောက်ကို သိပ်ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ မြန်မာအချင်းချင်းပဲ ကိုယ်ချင်းစာစိတ် နည်းနည်း မွေးလိုက်တယ်။ သူတို့ လည်း ကျောင်းတတ်ရင်း တဘက်တလမ်းက အလုပ်လုပ်နေကြတာပဲ။ အလုပ်ကိုအလုပ်နဲ့တူအောင်လုပ်ရမယ် ဆိုတာတော့ နားလည်ပါတယ်။ လူတိုင်း အသိစိတ်ရှိတာမှ မဟုတ်တာ၊ ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ်က မှာချင်တာ၊ ပြောချင်တာကို ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ချိုချိုသာသာပဲ မှာတယ်။ ပို့ တာ နောက်ကျနေရင် ထပ်မှာတယ်။ စာပွဲထိုးတွေ အများကြီးပဲဟာ။ နောက်ဆုံး မရရင် ကောင်တာမှာ ရှိနေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ထသွားပြော လိုက်တယ်။ ကိုယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောဆိုရဲ့သားနဲ့အရမ်းအဆင်မပြေဘူး ဆိုရင် ဆိုင်ရှင်ကို အေးအေးဆေးဆေး ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်က စီပွါးရေးလုပ်နေတာပဲ၊ သူ့ ကို ပိုက်ဆံ လာပေးနေတဲ့ စားသုံးသူတွေကို ဘယ်လို ဆက်ဆံရမလဲ နားလည်ပါတယ်။
တခြားဆိုင်တွေတော့ မစားဖြစ်ဘူး။ စားဖြစ်ရင် ဒီမှာရေးအုံးမယ်။ စားဖြစ်ဖို့ တော့ မလွယ်ဘူး။ အပြင်မှာ စားတဲ့အခါတွေမှာ ဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့ပန်ကန်တစ်ခုတည်းမှာ ပုံပြီးစားရတာကို မကြိုက်ဘူး။ အိမ်မှာဆိုရင်တော့ ကိုယ်စားချင်တဲ့ဟင်းကို ပုံပြီး စားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားချင်တဲ့ ပမာဏကို ကိုယ်သိနေတာမို့ လိုပါ။ ဟင်းချက်ပြီးသား နဲ့ထမင်း ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေမှာဆို အိမ်ကို ဟင်းဝယ်ဖို့ လောက် ပဲသွားတယ်။ ဒါတောင် အိမ်ရောက်ရင် ၀ယ်လာတဲ့ ဟင်းတွေကို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံရအောင် နည်းနည်းတော့ ပြန်ပြင်လေ့ရှိသေးတယ်။ ဟင်းချက်ပြီးသားတွေ ရောင်းတဲ့ မြန်မာဆိုင်တွေမှာဆို သူငယ်ချင်းတွေ စားလို့အတူ ဆိုင်မှာစားရမယ်ဆို တောင် ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ထမင်းကြော်၊ အသုတ်၊ ရခိုင်မုန့် တီ နဲ့ ကြေးအိုး စတဲ့ပုံစံတွေပဲ စားလေ့ရှိတယ်။ သည်းခံ ဖတ်ပေးကြပါ။ ထမင်း ၀ယ်ကျွေးချင်တဲ့သူတွေများ ဒီလာဖတ်မိရင် ကျွန်မ ဘယ်လို စားတတ်တယ် ဆိုတာ သိအောင် တမင် ရေးလိုက်တာပါ။ :D
အခုစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ သွားစားရင်း ကျွန်မ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ အတွေ့ အကြုံအပေါ် အခြေခံရေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ စားသောက်ဆိုင်တွေကို ကြိုက်တဲ့သူလဲ ရှိမယ်၊ မကြိုက်တဲ့သူလဲ ရှိမယ်။ ဒီမှာ နေသမျှ အိမ်မှာလည်း ထမင်းချက်မစားဖြစ်တော့ အဲဒီဆိုင်တွေ ထပ်သွားစားဖြစ်နေအုံးမှာပါပဲ။ စားဖြစ်ခဲ့လို့ထူးခြားတာလေးတွေ တွေ့ ရင် ဟိုရေး ဒီရေး လုပ်ဖြစ်အုံးမယ် ထင်တယ်။ ပိုဆိုးရင် ပိုးဆိုးသွားတဲ့အကြောင်း.. ကောင်းလာရင်လည်း ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ...။ ခုတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 8/06/2008 06:09:00 PM5comments
It's A New Dawn, It's A New Day!!!
နေ့ သစ်တွေတိုင်းကို အားအင်အပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့တွန်းအားတွေပေးနိုင်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်
Oh god it seems I’ve been on the road all night
Got momma’s picture on the seat beside me
But I’m ready to face
And I ain’t slowing down
Gotapocket full of dreams I’ve been saving
ခုရက်ပိုင်း သီချင်းတွေ အတော်များများ နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့။ ဒီသီချင်းလည်း တစ်ပုဒ် အပါအ၀င်ပေါ့။ သီဆိုသူ က Canadian အဆိုတော် Crystal Shawanda ။ သူမရဲ့ အမည် Shawanda ဆိုတာ "Dawn ofaNew Day" လို့အဓိပ္ပါယ်ရတယ်လို့ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အခု "Dawn ofaNew Day" Album ကို Canada မှာ 24 June 2008 က ဖြန်ချီခဲ့ပေမယ့် US မှာတော့ Augsut 19 မှ စဖြန့် မယ်လို့သိရတယ်။ ဒီသီချင်းမှ မဟုတ်ဘူး အဲဒီ အခွေထဲမှာပါတဲ့ တခြားသီချင်းတွေကို လည်း နှစ်သက်လို့ထပ်ခါထပ်ခါ နားထောင်ဖြစ်နေတယ်။
Credit to Ma Jewel
Posted by Nay Nay Naing at 8/05/2008 10:23:00 PM3comments
ဟိုတစ်နေ့ က သီချင်းဒေါင်းလုတ်လုပ်တာ wav file ပဲရတော့ mp3 ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားရင်း Media-Convertကို စမ်းသုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပထမတော့ ကိုယ်အမြဲ သုံးလေ့ရှိတဲ့ Zamzar နဲ့mp3 ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားတာပါ။ Zamzar မှာ file ကို upload လုပ်ပြီး၊ နောက် ၃ နာရီကျော်ကြာတဲ့ အထိ download link ပါတဲ့ အီးမေး ရောက်မလာဘူး။ အရင်က ဒီလောက်မကြာဘူး။ ၅-၁၀ မိနစ်လောက်လောက်ပဲကြာတယ်။ သုံးတဲ့သူများလို့ လား မသိဘူး။ ဒါနဲ့Media-Convert ကို သုံးဖြစ်သွားတယ်။
Media-Convert က 100% free service ပါ။ ယူဇာ အကောင့်တွေ ဘာတွေလုပ်ဖို့ မလိုဘူး။ သုံးပြီးရတာ အတော်လေး အဆင်ပြေတယ်။ Convert လုပ်တာ မြန်လဲ မြန်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာထဲက ဖိုင်တွေကို upload (Local File Conversion) လုပ်ပေးလို့ ရသလို့ ၊ အင်တာနက်ပေါ်က ဖိုင်တွေကိုလည်း URL ပေးပြီး (Conversion From Url) convert လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကွန်ပြူတာထဲက ဖိုင်ကို ရွေးလိုက်ရင် Input Format ကို တခါတည်း အလိုလိုရွေးပေးတာလေးကို သဘောကျတယ်။ ပြီးရင် ကိုယ်ပြောင်းချင်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားကို Output format မှာရွေးပေးလိုက်လို့ ရတယ်။
Media-Convert ကောင်းတဲ့ အချက်တစ်ခုက convert လုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ ဖိုင်ကို တခါထဲ Split လုပ်ခိုင်းလို ရတဲ့ feature ပါနေတယ်။ File ကို Split လုပ်ချင်တယ်ဆို Convert လုပ်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါတည်း ဘယ်လောက် အရွယ်အစား split လုပ်မယ်ဆိုတာ ရွေးလိုက်လို့ ရတယ်။ file တွေပြန်ဆက်ရင် HJSplit ကိုသုံးလို့ ရပါတယ်။
Media-Convert ကို အရင်သုံးလေ့ရှိတဲ့ Zamzar နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မိတယ်။
Media-Convert မှာ ပြောင်းလို့ ရတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားက Zamzar မှာပြောင်းလို့ ရတဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားထက် ပိုများတယ်။ ( Media-Convert Support File Format List)
Media-Convert မှာ Split Feature ပါတယ်။ အများဆုံး အပိုင်း ၂၀ အထိ ခွဲလို့ ရတယ်။ ZamZar မှာ မပါဘူး။
Media-Convert မှာ convert လုပ်မယ်ဆို file size အကြီးဆုံး 150MB အထိရပြီး၊ ZamZar မှာတော့ 100MB ရတယ်။
Zamzar မှာ file convert လုပ်တဲ့အခါ အီးမေးတစ်ခု ထည့်ပေးရပြီး အဲ့ဒီအီမေးကို download link ပို့ ပေး။ Media-Convert မှာတော့ အီးမေးပေးစရာ မလိုဘူး။ တခါတည်း convert လုပ်ပြီး download လုပ်ဖို့Link ကို တန်းပေးတယ်။ ဒီတော့ convert လုပ်ပြီးတဲ့အထိ စောင့်နေဖို့ တော့ လိုတယ်။
Media-Convert က 100% Free။ အခုအချိန်အထိ Member Register လုပ်ဖို့ ဆိုတာ ရှိကို မရှိသေးဘူး။ Zamzar မှာတော့ Free နဲ့Member ဆိုပြီး နှစ်ခုရှိတယ်။ Member Signup လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုက်ဆံပေးရပြီး ပိုကောင်းတဲ့ Feature တွေရနိုင်တယ်။
Media-Convert နဲ့Zamzar(Free version) နှစ်ခုလုံးမှာ Convert လုပ်တဲ့ file ကို ၂၄ နာရီ အထိသိမ်းပေးထားတယ်။
Media-Convert မှာ File Hosting service ရှိတယ်။ ဖတ်ကြည့်ရသလောက်ဆို Hosting မှာ တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တစ်ခုကို ၃ ပတ်အတွင်း ၂ ကြိမ်အနည်းဆုံး download လုပ်မယ်ဆို ရက်ပေါင်း ၁၂၀ အထိ သိမ်းပေးထားမယ်။
Media-Convert မှာ Image File တွေကို convert လုပ်တဲ့အခါ file အမျိုးအစားသာမကဘူး၊ Width, Height နဲ့PNG Quality ကိုပါ ရွေးပေးလို့ ရတာတွေ့ ရတယ်။ Zamzar မှာ file အမျိုးအစား တစ်ခုပဲ ရွေးပေးလို့ မရဘူး။
Media-Convert မှာ Website Screenshot လုပ်ပေးတဲ့ Feature ရှိတယ်။ Zamzar မှာ မပါဘူး။
Media-Convert မှာ Send File to Mobile ရှိတယ်။ Zamzar မှာ မပါဘူး။ ( ဒီ Feature ကိုတော့ စိတ်မ၀င်စားလို့ ၊ Phone မှာလည်း ဘာမှ Download လုပ်လေ့မရှိတာနဲ့မစမ်းကြည့်ဖြစ်ဘူး။ )
ကျွန်မ သတိထားမိတဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို ဒီလောက်ပါပဲ။ အခုရပ်ပိုင်းတော့ file convert လုပ်စရာရှိရင် Media-Convert ကို သုံးဖြစ်နေတယ်။ တခါတလေ လည်း Zamzar ကိုသုံးနေတုန်းပါပဲ။ အဆင်ပြေသလိုပေါ့။ Zamzar ကို ကျွန်မ သုံးလာတာ ၂၀၀၆ ခုနှစ် လောက်ထဲကဆိုတော့ အတော်ကြာနေပြီ။ ဒီနေရာမှာလည်း တစ်ခါရေးဖူးပါတယ်။ Zamzar အကြောင်း သိချင်တယ်ဆို ဒီအောက်ကလင့်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/05/2008 05:03:00 PM3comments
I love you, say we're together baby, you and me...
I will promise you my heart, and give you all you need
If you takes some time
If you tell me you don't need me anymore,
to make our lifealittle better, ooh...
I love you, say we're together baby, say we're together...
I love you, say we're together baby, say we're together, oh
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ပို့ ပေးတဲ့ သီချင်း။ နားထောင်ကြည့်ပြီး သဘောကျတာနဲ့ဘယ်သူ ဆိုတာလဲ မေးကြည့်တော့ မသိဘူးတဲ့။ နောက်ဆုံး Google ကိုပဲ အားကိုးပြီး ဘယ်သူ ဆိုတာလဲ လိုက်ရှာကြည့် လိုက်ရတော့တယ်။ ဒီသီချင်းကို ယူအက်စ်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ အသက် ၁၉ နှစ်ပဲ ရှိသေးတဲ့ ထိုင်ဝမ်အဆိုတော် Joanna Wang သီဆိုထားတာ ဖြစ်ပြီး၊ ယခုနှစ်ဆန်းပိုင်းက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ Start From Here Album မှာ ပါဝင်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရပါတယ်။
Source : I Love You - Joanna Wang
Posted by Nay Nay Naing at 8/04/2008 04:09:00 PM4comments
မြက်ခင်းပေါ်တွင် လမ်းလျှောက်ရခြင်းကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ အစ်မတစ်ယောက် သို့ သတိတရ....
ကမ္ဘာပထမဆုံး Krispy Kreme က ထုတ်လုပ်တဲ့ Grass Flip Flops။ Summer အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်တာလို့ သိရတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာ အလုပ်ရှုပ်ပြီး အပြင်ထွက်ပြီး summer ရဲ့ အရသာကို မခံစားနိုင်အားတဲ့ သူတွေအတွက်။ ရေမှန်မှန်လောင်း ပေးမယ်ဆို ဖိနပ်တစ်ရံကို season တစ်ခုအကြာ ၄ လ ကျော် အထိခံတယ်လို့ပြောထားတယ်။ မြက်ပင်လေးတွေ ကြီးလာဖို့၃ ပတ်လောက် ကြာမှာ ဖြစ်ပြီး၊ shoe တစ်ခုစီမှာ မြက်ပင်ပေါင်း ၅၀၀၀ လောက်ပါတယ် လို့ သိရပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ ဒီလိုဖိနပ်တွေကို London မှာပဲ ၀ယ်လို့ ရပါသေးတယ်။ နောက်မကြာမှီမှာတော့ Krispy Kreme ကနေပြီး ဒီလို ဖိနပ်တွေကို တကမ္ဘာလုံးသို့ဖြန့် ချီ ရောင်းချရန် plan ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 8/04/2008 11:46:00 AM3comments
ဒီ ၃-၄ လအတွင်းမှာ အမြင်တွေ အထင်တွေ မရှင်းမလင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်..
အရှိကို အရှိ အတိုင်း၊ အမှန်ကို အမှန် အတိုင်း
Posted by Nay Nay Naing at 8/03/2008 03:48:00 PM4comments
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ က Google - Blogger ကို အသုံးပြုတဲ့ လူကြည့်များတဲ့ မြန်မာဘလော့တချို့ပိုစ့်တင်လို့ မရဘူး ဆိုပြီး ရေးထားတာတွေ တွေ့ ရတယ်။ Spam Blog တွေအဖြစ် သံသယ ရှိတဲ့အတွက် ပိုစ့်အသစ် တင်ခြင်းကို ပိတ်ထားခြင်း ခံရတာဖြစ်ကြောင်း သိရတယ်။ နောက်ပိုင်း Blogger ကို ဆက်သွယ်ပြီး ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ အခါ ၂၄ နာရီလောက်အကြာမှာ ပိုစ့်တွေ ပြန်တင်လို့ ရကြောင်း သိရပါတယ်။
နာမည်ကြီး လူကြည့်များတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ရေးနေတဲ့ ဘလော့တွေမှာ တချိန်ထဲမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကများ နှောက်ယှက်လိုတဲ့ အတွက် တမင်လုပ်တာလား၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာလို့ လဲ ဆိုပြီး သိချင်တာ နဲ့လိုက်ရှာ ကြည့်မိတဲ့အခါ မြန်မာဘလော့ တွေမှာသာ ဒီလိုပြဿနာဖြစ်တာ မဟုတ်ပဲ တခြား ဘလော့ အတော်များများပါ Spam အနေနဲ့သတ်မှတ်ခြင်း ခံရတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
Buzz Blogger မှာ ခုလို ဖြစ်တာဟာ Google ရဲ့ algorithms အရ Spam အဖြစ် မသတ်မှတ်ပေမယ့် Data processing code ရဲ့ Bug တစ်ခုကြောင့် ဘလော့တစ်ချိုကို မှားယွင်းစွာနဲ့Spam အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး Lock လုပ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခု 1 August ( Friday) မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့ကြောင်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ တဆက်ထဲ အခုလိုမျိုး အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရမှု့ အတွက် Spam လို့သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ Blogger တွေ နဲ့ဘလော့ဖတ်သားအပေါင်းကို တောင်းပန်ထားတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကိုယ့်ဘလော့မှာရှိတဲ့ ပိုစ့်တွေကို ပျောက်ပျက်သွားမှာ စိုးရင် အလွယ်တကူ သိမ်းလို့ ရတဲ့ Import and Export Tools အကြောင်းကိုလည်း ပြောထားပါတယ်။ Firday မှာ ဖြစ်တဲ့ Bug ကြောင့် Spam အဖြစ် သံသယ ရှိခြင်းခံရပြီး အခုအချိန်အထိ ပိုစ့်တင်လို့ မရသေးဘူးဆိုရင် Dashboard ပေါ်က Request Unlock Review ကို click လုပ်ပြီး သတင်းပို့ နိုင်ကြောင်းလည်း ရှင်းပြထားတာတွေ့ ရပါတယ်။
Google blocked some of its Bloggers' sites as spams - မိုးမခ မီဒီယာ
Google's Blogger top for web-hosted malware - zdnet.co.uk
Blogger New Feature: Import and Export Tools
You Are Not Spam , Spam Fridays - Buzz Blogger
Labels: Myanmar, News, Technology
Posted by Nay Nay Naing at 8/03/2008 09:26:00 AM0comments
Posted by Nay Nay Naing at 8/01/2008 11:07:00 PM2comments
အလုပ်က စင်္ကာပူရီယမ်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပို့ ပေးတဲ့ e-Coupons တွေပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် စင်္ကာပူ အမျိုးသားနေ့အထိမ်းအမှတ် အနေနဲ့discount ပေးတာတွေပါ။ ခုလိုပဲ သူငယ်ချင်းတွေ ပို့ ပေးတဲ့ e-Coupons တွေ အီးမေးကနေ ရဖူးပေမယ့် အဲဒီလို e-Coupons တွေကို print လုပ်ပြီး တစ်ခါမှ မသုံးဖူးဘူး။ ဘယ်လို သုံးရမလဲ မသိတာလဲ ပါမယ်။ သူငယ်ချင်းကတော့ပြောတယ်၊ print လုပ်သွား၊ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းထဲ ထည့်သွားပြီး ပြလိုက်၊ ရတယ်တဲ့။ ဟုတ်မဟုတ်မသိဘူး။ ကိုယ်မသုံးတတ်၊ သုံးလေ့မရှိပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက် အတွက်များ အသုံးဝင်လေမလား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ဒီနေရာမှာ ပြန်ပြီး share လုပ်လိုက် ပါတယ်။
Jurong BirdPack Admission 30% off (1st to 31st August 2008)
Night Safari Admission 50% off (1st to 31st August 2008)
Popular Bookstores (Storewide) 15% discount and HARRIS Books (Storewide) 20% discount (1st July till 30 September 2008)
Gelare Discount - 1st July to 15 September 2008
Outback StreakHouse discount - vaild till 30 September 2008
အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ e-Coupons ၆ ခုလုံးကို ရယူချင်တယ်ဆို ဒီအောက်က လင့်မှာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး ယူလို့ ရပါတယ်။
အသုံးမပြုခင် Terms and Conditions လေးကို ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ :-)
Posted by Nay Nay Naing at 8/01/2008 02:50:00 PM2comments
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လရဲ့ နေ့ ရက်များသို့ ...
Posted by Nay Nay Naing at 8/01/2008 10:41:00 AM0comments